Posted by သက်တန့်ချို at 10:54 AM3comments:
နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ ။ ဒီနေ့ပြန်ရောက်လာတာ တကယ့်ကို မနေ့တစ်နေ့ကလိုပါပဲ ။ စာပေ ရေယာဉ်ကြီးမှာ စီးမျောရင်းတချို့လည်း ကမ်းတွေကပ်ကြ တချို့လည်းပန်းတိုင်ရောက်ကြ တချို့လည်း နစ်မြုပ်ကြနဲ့ ကျွန်တော်တို့ စီးနင်းလာခဲ့ကြတာ အခုဆို နှစ်တွေအတော်ကြာခဲ့ပါပြီ ။ ဒီနှစ် အစ်မတော် နတ်သမီး အတွက် ထုံးစံအတိုင်း မွေးနေ့ပို့စ်လေးရေးပေးဖို့ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ် ။ အမှန်တော့ ခင်မင်ရင်းနှီးသူတစ်ယောက်အတွက် သာ မွေးနေ့ကဗျာ နဲ့ မွေးနေ့ပို့စ်ရေးပေးပေမယ့် ကျွန်တော့်မွေးနေ့ကိုတော့ ကျွန်တော် သိပ်ပြီး စိတ်ဝင်တစားမရှိခဲ့ဘူး ။ ဒါပေမယ့် မွေးနေ့ကဗျာရေးပေးရတာ ၀ါသနာပါတဲ့ လူဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလည်း နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ အစ်မတော်အတွက် မွေးနေ့ ပို့စ်လေးရေးပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
ပထမဆုံး ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ် ။ ဘလော့တွေစစလုပ်ခြင်း တုန်းက ကျွန်တော်လည်းတခြားသူတွေနီးတူ ငါးကန်လေးတွေ စီဘောက်လေးတွေထည့်ရတာ အရမ်းဝါသနာပါခဲ့တယ် ။ ( အခုတော့ ဆိုက်က လေးတာကြောင့် ပြန်ဖြုတ်လိုက်တယ် ) အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော့်ရဲ့လူမသိသူမသိ ဘလော့လေးကို နေ့စဉ်လာလာပြီးအားပေးစကားတွေပြော သူငယ်ချင်းတွေအဖြစ်ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ရသူ အစ်မအရင်းတစ်ယေက်လို ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ရသူကတော့အစ်မတော် နတ်သမီးဖြစ်ပါတယ် ။ မော်ဒယ်လုပ်ငန်းနဲ့ အရင်က ရပ်တည်ခဲ့သူပီပီ ဓါတ်ပုံရိုက်အရမ်းဝါသနာပါတဲ့အစ်မတော် ဟာ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်သူတွေ အလွဲသုံးစားလုပ်ခံရမှုတွေကို ကျွန်တော်တို့အားလုံးစုပေါင်းကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတယ် ။ “ သက်တန့်ချို ” ဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးပီပီပြင်ပြင်မဖြစ်ပေါ်လာခင်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမဟာ တစ်ဦးရဲ့အခက်အခဲကိုတစ်ဦး ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့ကြတယ် ။
သူဟာ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူပီပီ သူနေမကောင်းတာကအစ သူ ဆေးရုံတက်ရတဲ့အဆုံးကျွန်တော့်ကို တိုင်ပင်တယ် မေးတယ် ဆရာဝန်လိုတစ်မျိုး မောင်ငယ်တစ်ယောက်လိုသဖွယ် နွေးထွေးတဲ့အစ်မရင်းတစ်ယောက်လို ဆက်ဆံပေးခဲ့တယ် ။ သူနဲပတ်သတ်သမျှ အားလုံးကျွန်တော်ဝိုင်းဖြေရှင်းပေးခဲ့သလို သူကလည်း သူနဲ့ပတ်သတ်သမျှ ကျွန်တော့်ကို တိုင်ပင်ခဲ့တယ် ။ အခုတော့ မနှစ် တစ်နှစ်ကလိုပဲ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ဆိုတဲ့ရက်တစ်ရက်ရောက်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ ။
“ အစ်မတော် နတ်သမီးရေ နိုဝင်ဘာ ၁၉ က ကံကောင်းခြင်းတွေဆောင်ယူနိုင်ပါစေ . . ဓမ္မနဲ့အဓမ္မကို ခွဲခြားသိမြင်လို့ အမျိုးဘာသာ သာသနာကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါစေ . . အန္တရာယ်အားလုံးကင်းလွတ်ချမ်းသာလို့ သွားလေရာ လာလေရာ ခလုတ်မထိ ဆူးမညိပါစေနဲ့အစ်မတော်ရေ . . ”
“ နိုဝင်ဘာ ၁၉ နှင့် နတ်သမီးတစ်ပါး ”
အဲဒီတစ်ရက်က နေခြည်တွေ စလင်းတဲ့နေ့
ခင်းထားတဲ့လမ်းတလျှောက် . . သင်းပျံ့တဲ့ ပန်းရနံ့အချို့
လေပြည်က သော့သော့ မော့မော့
ကြော့ရှင်းတဲ့ ဆံနွယ်ခက်တွေအောက် . .
ကြည့်စမ်း . . . ပြာရီဝိုဝါးတဲ့ကောင်းကင်ပြာအောက်
ရောင်စုံ့ လိပ်ပြာကလေးတွေ ၀ဲပျံလို့
နှင်းတွေ . . . နှင်းတွေ . . .
နတ်သမီးရေ . . နိုဝင်ဘာက ချမ်းစမ့်သော အတွေးကိုယ်စီနဲ့
နိုင်ဝင်ဘာက အေးမြသော အလွမ်းကိုယ်စီနဲ့
ကော်ဖီခါးခါးတစ်ခွက်ထဲ စိမ့်ဝင်နေသော အတွေးတွေဟာ
ဟိုတစ်စ . . ဒီတစ်စ ပျံ့ကျဲလူးလွန့်နေဆဲ . .
ကြည့်စမ်း . . . ဒီနေ့ ပန်းတွေ ပွင့်လန်းလာလိုက်ကြပုံ
ကြည့်စမ်း . . .နိုဝင်ဘာ နတ်သမီးရဲ့ ၀တ်ရုံဖြူလွှလွှပေါ်က အလင်းခက်တွေ
တစ်ဆယ့်ကိုး ကိန်းဂဏန်းနဲ့ နာရီလက်တံကြား
သူ ဟာ နူးညံ့ဖြူစင်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ . .
နတ်သမီးရေ . . .
အနန္တအသင်္ချေ မေတ္တာရေကသာ အေးမြစေခဲ့ရ
သင်သွားလေရာ ခလုတ်လည်းမထိ ဆူးလည်း မငြိစေရ
နားခိုးရာ ဘ၀ တလျှောက် အေးချမ်းဆိတ်ငြိမ်စေ . .
နတ်သမီးရေ . .
လမ်းတွေကကြမ်းတယ် . . ခရီးတွေက ဝေးတယ်
ဟိုး . . ရှေ့က ကမ်းစပ်ကို စူးစိုက်ကြည့်
ပန်းတိုင်ဆိုတာရှိတယ် . . စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းတွေကိုဘေးဖယ်ကွဲ့
နိုဝင်ဘာရေ . .
သူမကို နှင်းဖြူဖြူတွေနဲ့ ပွေ့ဖက် အေးမြစေ ကွဲ့
သူမကို ပန်းတွေ ခင်းတဲ့ ဥယျာဉ်ထက် မွှေးပျံ့သင်းကြိုင်စေကွဲ့
ဒီတစ်ရက်ဟာ အမှတ်တရတွေ ဆုံတဲ့ တစ်နေ့
ငါတို့ ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး သူငယ်ချင်းရယ်
မင်းလည်း အမြဲ . . ငြိမ်းချမ်းစေကွယ်
“ ဟက်ပီးဘတ်ဒေး . . တူးယူ. . . ဟက်ပီဘတ်ဒေး တူးယူ ....
ဟက်ပီးဘတ်ဒေး . . တူးယူ. . . ဟက်ပီဘတ်ဒေး တူးယူ ....
ဟက်ပီးဘတ်ဒေး . . တူးယူ. . . ဟက်ပီဘတ်ဒေး တူးယူ ....”
နတ်သမီးဘလော့ - www.seaandangel.blogspot.com
Posted by သက်တန့်ချို at 9:35 AM3comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 12:32 PM3comments:
- သင့်ဆီက ဘာမှမလိုအပ် သင်လိုအပ်သမျှသာပေးချင်သူများဖြစ်သည် ။
- သင့်ဆီက ဘာမှမတောင်း သင်တောင်သမျှသာ ပေးချင်သူများဖြစ်သည် ။
- သင့်ဆီကို ဘယ်လို ဆိုးကျိုးမှ မပေး ကောင်းကျိုးများသာ ပေးချင်သူများဖြစ်သည် ။
- သင့်ကို ဘယ်တော့မစွန့်ပစ် သင်စွန့်ပစ်မှသာ မျက်ရည်စက်လက်ကျန်ခဲ့သူများဖြစ်သည် ။
- သင့်ကို ရင်အုပ်မကွာ အမြဲစောင့်ရှောက်သည် သင်ကသာ သူတို့ရင်အုပ်ထဲက စုန်ကန်ထွက်ပြေးသွားသူဖြစ်သည် ။
- သင့်ကို မျက်ရည်မကျစေတတ် သူတို့သာ သားသမီးအတွက်မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျရသူများဖြစ်သည် ။
- သင့်ကို ကောင်းကင်ကြီးပမာ အုပ်မိုးလို့ စမ်းရေပမာ မေတ္တာတရားဖြင့် အေးမြစေတတ်သူများဖြစ်သည် ။
- သင့်ကို ဘယ်တော့မှ မစော်ကား သင်ကသာ တခါတရံ စော်ကားနေခြင်းဖြစ်သည် ။
- သင်ချမ်းသာ ဆင်းရဲ ပညာတတ်ခြင်းမတတ်ခြင်းကို စိတ်မ၀င်စား သူတို့ရင်သွေးအားလုံးကိုတပြေးညီချစ်ခင်တတ်သူများဖြစ်သည် ။
သင်စော်ကားသမျှကို အမုန်းမဖက် အပြုံးမပျက်ပဲ သည်းခံခွင့်လွှတ်တတ်သူများမှာလည်း မိဘများပင်ဖြစ်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 12:30 PM5comments:
တစ်ခါတုန်းက ရွာကလေးတစ်ရွာမှာ သားအဖ နှစ်ယောက်ရှိတယ် ။ ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးလေကို မွေးမွေးပြီးကတည်းက အလွန်အမင်းကို ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ရတယ် ။ သမီးလေး မွေးပြီးလို့ လသားအရွယ်မှာပဲ မိခင်က ဆုံးပါးရှာတဲ့အတွက် မိတဆိုးသမီးလေးဆိုပြီး လိုလေသေးမရှိ ထားခဲ့တယ် ။
ဒါပေမယ့်လည်း ဘ၀ကံနုံချာလွန်းတဲ့အတွက် ဆင်းဆင်းရဲရဲ့ချို့ချို့တဲ့တဲ့နေခဲ့ရရှာတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ သမီးလေး အပျိုပေါက်အရွယ်ရောက်လာခဲ့တယ် ။ “ အဖေ . . သမီး မြို့မှာသွားပြီးကျောင်းတက်ချင်တယ် ” အားတက်သရော ပြောလာတဲ့ သမီးငယ်စကားကြောင့် ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ရင်ထဲ
“ အေးပါသမီးရယ် အဖေပိုင်တဲ့လယ်ကလေးရောင်းပြီး သမီးကို မြို့ကျောင်းထားပေးမှာပေါ့ ” ဆိုပြီးအားပေးစကားပြောဆိုခဲ့တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်မြို့ကျောင်းကို တက်ခဲ့ပါပြီ ။ လယ်ယာ မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ ဖခင်ကတော့ တောရွာမှာပဲ သူများလယ်ကို အငှားသွားလုပ်လိုက် ၊ သူများခိုင်းတာလေးလုပ်လိုက်နဲ့ ချို့တဲ့စွာနေခဲ့ရတယ် ။
လစဉ်လတိုင်း ရသမျှ ပိုက်ဆံလေးကို ခြစ်ခြုတ်စုလို့ သမီးလေးအတွက် ပေးပိုရရှာတယ် ။ တစ်နေ့တော့ သမီးလေးကိုတွေ့ချင်လွန်းအားကြီးတဲ့ဖခင်က မြို့ကို တက်သွားပြီး သမီးလေးကျောင်းကိုလိုက်သွားခဲ့တယ် ။ သမီးဖြစ်သူက ဖခင်ကိုတွေ့တဲ့အခါ မျက်နှာတစ်ချက်ပျက်သွားပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်လို့ မခေါ်မပြောပဲ ထွက်သွားခဲ့တယ် ။ ဖခင်က ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ပဲ ရွာကိုပြန်လာခဲ့တယ် ။
နောက်တစ်နေ့မှာ ရွာကိုသမီးဖြစ်သူလိုက်လာပြီး ဖခင်ကိုပြောတယ် ။ “ အဖေရယ် ရှက်စရာကြီး သမီးကျောင်းကိုဘာလို့လိုက်လာရတာလဲ ... သမီးကိုတွေ့ချင်တယ်ဆို စာရေးလိုက်ပေါ့ လာတွေ့မှာပေါ့ အခုတော့ အဖေ့ကို သမီးအဖေမှန်းသာသိသွားရင် သမီးရှက်လွန်းလို့ မျက်နှာဖော်ရဲမှာမဟုတ်ဘူး ” လို့ပြောခဲ့တယ် ။ ဖခင်ဖြစ်သူက မျက်နှာညှိုးနွမ်းစွာနဲ့ မျက်ရည်တွေစီးကျလို့ သမီးဖြစ်သူကို ဘာမှပြန်မပြောပဲ တွေတွေကြီးပဲစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ် ။
အဲဒီလိုနဲ့ . . .
သမီးလေးဖြစ်သူ ဘွဲ့ယူတဲ့နေ့ရောက်လာပါပြီ ။ သမီးဖြစ်သူက ရွာက အဖေလည်း ဘွဲ့ယူတာ ကြည့်ချင်မှာပဲလေ ငါ့အဝေးကနေ ကြည့်ခိုင်းရင်ရတာပဲဆိုပြီး သူ့အဖေကို မြို့ကိုလိုက်လာဖို့ ရွာကိုစာပို့လိုက်တယ် ။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ရွာက စာပြန်လာတယ် ။
သမီးလေး စာပိုတဲ့အချိန် အဖေလူ့လောကမှာ မရှိတော့ဘူးကွယ် သမီး လေးမြို့ကိုခေါ်မယ့်ရက် ဆို..အဖေ ဟာ တမလွန်မှာ ရောက်နေရောပေါ့ ဒါကြောင့်ဒီစာလေးကို ကြိုရေးထားခဲ့တာပါ .. သမီးရေ သမီးငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ သမီး နဲ့အဖေ တခြားရွာကို သွားစဉ်က နေကလည်းပူ လယ်ကွင်းပြင်ပြင်ထဲ မှာ စကားလေးမပီကလာပီကလာနဲ့ သမီး ရေဆာတယ်လို့ ပူဆာခဲ့တယ်နော် ။ အဖေတို့ဆီမှာသောက်ရေကလည်းပါမလာတော့ သမီးကို နေရိပ်ထဲခဏထားပြီး ကွင်းပြင်ကြီးထဲ အဖေပြေးလွှားလို့ တခြားရွာမှာ သောက်ရေ သွားယူခဲ့ဖူးတယ် ။
သမီး နောက်ထပ် ဆယ်နှစ်အရွယ်လောက်မှာပေါ့ ။ သမီးလေး ကျောင်းမှာ မျက်နှာမငယ်ရဖို့ .. အဖေ ဟာ နေ့တိုင်း ထမင်းတစ်နပ်ပဲ စားပြီးခြိုးခြံချွေတာခဲ့ဖူးတယ် ။ သမီးရေ .. သမီးကို ဒါတွေပြန်ပြောနေရတာ သမီးဆီက အဖေ့မေတ္တာကို နားလည်ပေးနိုင်ဖို့တစ်ခုပါပဲ ။
သမီးလေး . . သမီးလေး သတိမထားမိလို့ပါကွယ် သမီးလေး မြို့ကျောင်းကို အဖေ အပတ်စဉ်တိုင်းရောက်ပါတယ် သမီးလေးရှက်မှာစိုးလို့ အဖေ အဝေးကနေပဲ သမီးလေးကို ငေးမောကြည်နူးနေခဲ့ရတယ် ။ သမီးရယ် ...သမီးဆီက အဖေဘာမှမမျှော်လင့်ပါဘူး လူ့ဘ၀ဆိုတာက တိုတိုလေးပါ အဲဒီတိုတိုလေးအတွင်းမှာ သမီးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမထားနိုင်ခဲ့တဲ့အဖေ့ကိုယ်သာ အဖေယူကြုံးမရဖြစ်ခဲ့တာပါ သမီးရယ် အဖေတို့ မိဘတွေဆိုတာ သားသမီးကိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိသလို သားသမီးတွေကလည်းအဖေတို့ကိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူး ။ ဘ၀အဆက်ဆက်က ဖြည့်ဆည်းလာတဲ့ ပါရမီတွေကြောင့်သာ ဒီဘ၀မှာ မိဘနဲ့သားသမီးဆိုပြီး တော်စပ်လာခဲ့ကြရတာပါ ။
သမီးလေးရေ ..သမီးကို အဖေခွင့်လွှတ်ပါတယ် ။ ကံတရားက မိဘကိုစော်ကားလို့ အပြစ်ပေးမှာကို အဖေက စိုးရိမ်ပူပန်နေခဲ့ရတာပါ ။ သမီးလေး သွားလေရာ ခလုတ်မထိ ဆူးမညိပါစေနဲ့ ။ ဘေးရန်ခပ်သိမ်းကင်းငြိမ်းပါစေ ...
သမီးရေ ...ဖေဖေ သွားနှင့်ပြီ ..ကွယ် လူ့လောကမှာ အကောင်းအဆိုးကို အမှားအမှန်ကို ခွဲခြားနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ ..မှာရင်း အဖေသွားနှင့်ပြီကွယ် ... ”
ဖြစ်ရပ်မှန်ဇတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ရွာကလေးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဇတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့ ။ အခုတော့ အဲဒီစာဖတ်ပြီး ကတည်းက ဇတ်လမ်းထဲက သမီးလေးဟာ အဲဒီနေ့မှာပဲ ရွာကိုပြန်ပြီး သူ့အဖေ မြေပုံနဲ့မနီးမဝေးက သီလရှင်ကျောင်းလေးမှာ အခုထက်ထိပဲ တရားရိပ်ကို ခိုလှုံနေပါတော့တယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 2:33 PM 38 comments:
Labels: ၀ထ္ထုတို, နှလုံးသားအာဟာရ
နန်းခင်ဇေယျာကို Miss Internet အတွက် တရားဝင်လင့်မှာ ကူညီချင်တယ်ဆိုရင်
နန်းခင်ဇေယျာရဲ့ Miss International 2012 Organizing ကော်မတီ အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးနဲ့ အဆက်အသွယ်ရပါတယ် ။ နန်းခင်ဇေယျာက ပေးပို့တဲ့မေးလ်ကို ဘာသာပြန်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
“ မင်္ဂလာပါ မြန်မာ !!!
ကျွန်မ နန်းခင်ဇေယျာ ပါ အခုလို ၀ိုင်းပြီးအားပေးတဲ့အတွက်ရော Vote လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ရော ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thai beauty fan page က တကယ်တော့ တရားဝင် vote ပေးရမယ့်လင့်မဟုတ်ပါဘူး တရားဝင်vote ပေးရမယ့်လင့်ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ် ။
အခုအောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံး တစ်ကမ္ဘာလုံးက Miss Internet အတွက် ၀ိုင်းပြီး ပေးကြတဲ့ လင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် Official မဟုတ်တဲ့လင့်တွေကို Share မလုပ်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ။ အရင်ဆုံးအောက်ပါလင့်ကိုသွားပါ ။
http://www.flickr.com/photos/64086169@N03/sets/72157631640709082/with/8062634660/ ကိုဖွင့်လိုက်ပါ အဲဒီမှာ အလယ်မှာ ကျွန်မရဲ့ပုံရှိပါတယ် ။ အဲဒီပုံလေးကို Click နှိပ်လိုက်ပါ ။ Favourites တွေဘာတွေလုပ်စရာမလိုပါဘူး ။ သူတို့လိုချင်တာက ကြည့်ရှုသူအရေအတွက် VEIWS ကိုဖြစ်ပါတယ် ။
အခု ကျွန်မ ဓါတ်ပုံမှာ ၁၁၆၀၀၀ ကြိမ်ရှိပြီး တခြားတိုင်းပြည်ကသူတွေကတော့ ၁၉၀၀၀၀ ရှိပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အားလုံးဝိုင်းပြီးကူညီကြပါဦး ။ ကျွန်မ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်က ဖွင့်လို့မရတော့ပါဘူး Hacking လုပ်ခံရတယ်လို့ထင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီသတင်းလေးကိုဝေမျှပေးပါ ။ ဒါကြောင့် ကျေဇူးပြုပြီး တခြားနေရာတွေလိုက်ပြီး Vote လုပ်နေရင်အချိန်ကုန်ပြီး Views အရေအတွက်တက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး အခုပေးထားတဲ့လင့်ကသာ တရားဝင်ဖြစ်ပါတယ် ။
(ကျွန်မရဲ့ဖေ့ဘုတ်အကောင့်ကို မသုံးနိုင်တဲ့အတွက် ၀မ်းနည်းစွာနဲ့တောင်းပန်ပါတယ် ဒါပေမယ့် မေးလ်ကနေတဆင့် Update တွေကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် )
သက်တန့်ချို - “ အခုနည်းကပိုတောင်လွယ်သွားသေးတယ် ပုံကိုကလစ်နှိပ်တာနဲ့ view count တစ်ခုတက်သွားမယ် ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး ကြည့်တဲ့အကြိမ်အရေအတွက်တက်အောင်သာ http://www.flickr.com/photos/64086169@N03/sets/72157631640709082/with/8062634660/ ကိုနှိပ်ပြီး ခဏခဏ view count တက်နေအောင်သူ့ပုံကို click နှိပ်ပေးဖို့ပဲလိုတယ် )
Posted by သက်တန့်ချို at 4:02 PM7comments:
ချစ်သူ့ထံပါး . . တခမ်းတနား ရေးဖြစ်တဲ့ ကဗျာ
ဝေါဟာရ တွေဟာ ခံစားချက်တွေနဲ့အညီ စီးဆင်းခဲ့
ဘယ်လို သခါင်္ရတရားကများ . . .
နင်ရော . . နေမှကောင်းရဲ့လား
သွားရတဲ့ခရီးကရှည် . . လေက ကြမ်း . . လှိုင်းကထန်
ပျံသာပျံပါ . . အချစ်ရယ်
ကောင်းကင်ကကျယ်တယ် . . ။
ငါလည်း ခဏခဏ ဆုတောင်းခဲ့ရ
ဒီဘ၀ မှာ ချစ်သူအတွက် ပေးဆပ်ခြင်းသက်သက်သာ ဖြစ်ရလို
သူမ . . ဘယ်တော့မှ မငိုပါစေနဲ့ ။
တမေ့တမော သတိရခြင်းတွေ ပေါင်းစုဆုံတဲ့အခါ
အသက်ထက်ဆုံး ဆုတောင်း လို
သူမအတွက် ဘယ်တော့မှ ကောင်းကင်မပြိုပါစေနဲ့ ။
Posted by သက်တန့်ချို at 1:01 PM 15 comments:
ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကို လုပ်ကို လုပ်ရပါမယ်ဗျာ
တစ်ခါတုန်းက လူတစ်ယောက်ဟာ တောကြီးမျက်မည်းထဲမှာ ခရီးသွားနေခဲ့တယ် ။ သူဟာ သူ့ဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့ရွာကို သွားဖို့အတွက် အခုလို တောကြီးမျက်မည်းထဲကနေ ဖြတ်သွားမှ သာ အမြန်ဆုံးရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ် ။ သူ သွားတဲ့လမ်းတလျှောက်မှာရှိတဲ့ ခြုံပုတ်တွေကို ရှင်းလင်းပြီး သွားတဲ့အခါ တစ်နေရာရောက်တော့ ပျားစားငှက်တစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ် ။ ပျားစားငှက်ဟာ ထူးထူးဆန်းဆန်း မြေပြင်ပေါ်မှာ လှဲနေပြီးခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို မိုးပေါ် ထောင်ထားတာတွေ့လိုက်ရတယ် ။
အဲဒီလူက အံ့သြလွန်းလို့ ပျားစားငှက်ကိုမေးလိုက်တယ် ။ “ ဘာလို့ မြေပေါ်မှာ လှဲအိပ်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို မိုးပေါ် ထောင်ထားရတာလဲ ” ပြီးတော့ သူကဆက်ပြောတယ် ။ “ ဒီလိုသာ မြေကြီးပေါ်လှဲနေရင် တောကောင်တွေ ကြံ့တွေ ဆင်တွေ ဖြတ်သွားတဲ့အခါ မင်းကို နင်းသွားမှာပေါ့ မင်းသေသွားမှာပေါ့ ” ဆိုပြီး ငှက်ကလေးကို သတိပေလိုက်တယ် ။
ငှက်ကလေးကပြန်ပြောတယ် ။ “ ဟာ ခင်ဗျား ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့သတင်းကို မကြားမိသေးဘူးလား ခင်ဗျားတို့ လူသားတွေက ဒီလိုသတင်းကိုပိုတောင်သိသင့်တာပေါ့ မကြာခင် မိုးပြိုကျတော့မှာဗျ မြေကြီးပေါ် ပြိုကျတော့မှာ ” လို့ ငှက်ကလေးက ထိတ်လန့်စွာပြောလိုက်တယ် ။ “ ဒီသတင်းကို သစ်တောက်ငှက်ဆီကရတာပါ ” လို့ ငှက်ကလေးကဆက်ပြောတယ် ။
ခရီးသွား လူက ငှက်ကလေးကို သနားဂရုဏာသက်စွာကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ် ။ “ ဟင် ..မင်းရဲ့ခြေထောက်လေးတွေက သေးသေးလေးတွေနဲ့ အားအင်ကလည်း ချိနဲ့ပါဘိသနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီမိုးကောင်းကင်ကြီးကို ထမ်းထားနိုင်မှာလဲ ” လို့ သနားတဲ့ဟန်နဲ့ပြောလိုက်တယ် ။ ငှက်ကလေးက ပြုံးပြီးတော့ပြန်ဖြေတယ် ။
“ မှန်ပါတယ်ဗျာ ခင်ဗျားပြောတာမှန်ပါတယ် ကျွန်တော့်ခြေထောက်လေးတွေဟာ သေးငယ်ပြီး အားအင်ကလည်းချည့်နဲ့ကောင်းချည့်နဲ့ပါလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကို ကိုယ်တတ်နိုင်တာကို လုပ်ကိုလုပ်ရပါမယ် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကို လုပ်ကိုလုပ်ရပါမယ်ဗျာ ” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတော့တယ် ။
ဒီနေရာလေးမှာ ဒီသတင်း မှန်တယ် မမှန်ဘူး ငှက်ကလေးဦးနှောက်ရှိတယ်မရှိဘူး ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူး ပုံပြင်ကပေးချင်တဲ့ အသိဟာ Reality ဆိုတဲ့ အစစ်အမှန်ဖြစ်မှုနဲ့ Reason ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေမဟုတ်ပါဘူး ။
တစ်ခုခု ပြဿနာ ဘေးဒုက္ခကြုံလာတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လောက်ပဲ မျှော်လင့်ချက်တွေကင်းမဲ့နေပါစေ ကိုယ့်အတွက် အဲဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲနေပါစေ ဘယ်တော့မှ ကျွန်တော်တို့လက်မြှောက်အရှုံးမပေးရပါဘူး ။ ငှက်ကလေးပြောသလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကို လုပ်ကိုလုပ်ရပါမယ်ဗျာ။ ဥပမာဗျာ AIDS ရောဂါကြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာပျံ့နှံ့နေတယ် ဘယ်လို မှကုသဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးလက်လျော့မနေရဘူး ။ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာ ဘာရှိလဲ ကျန်းမာရေးအသိပေးခြင်းလား ကာကွယ်ခြင်းလား သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြခြင်းလား အဲဒီလို လုပ်နိုင်တာလေးလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ ရှင်သန်နေရပါမယ် ။
The Bee Eater အား ခံစားဘာသာပြန်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 3:35 PM6comments:
ဟိုး ရှေးရှေးတုန်းက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလွန်ကို မာကြောတဲ့ စတီးချောင်းကြီးတစ်ခုရှိခဲ့တယ် ။ လူတွေက အဲဒီစတီးချောင်းကြီးကို ဒီအတိုင်းထားမယ့်အစား အသုံးဝင်မယ့်ပစ္စည်းတစ်ခုခုအဖြစ် ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းပြီး အသုံးပြုလိုကြတယ် ။ ပထမဆုံး ပုဆိန်တစ်ခုနဲ့စမ်းသပ်ခဲ့တယ် ။
ပုဆိန်ရဲ့အသွားနှစ်ဖက်က စတီးကို အကြိမ်ကြိမ်ပွတ်တိုက်သော်လည်း ဘယ်လို မထူးခြားမှုရှိမလာခဲ့ဘူး ။ ပုဆိန်ရဲ့အသွားတွေတုံးလာပြီး အစတွေပဲ့ထွက်ကုန်တဲ့အတွက် လူတွေက လက်လျော့လိုက်ကြပြီး လွှနဲ့စမ်းသပ်ကြပြန်တယ် ။ လွှကလည်း သူ့တာဝန်အတိုင်းရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်နဲ့စတီးချောင်းကြီးကို တိုက်ဖြတ်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် လွှ အသွားတွေ သာတုံးသွားပြီး တချို့က ကွေးကောက်တွန့်လိပ်သွားကြတယ် ။ အဲဒီအခါလူတွေက “ တူ ” နဲ့စမ်းသပ်ကြပြန်တယ် ။ ပထမဆုံးအကြိမ် စတီးချောင်းကို တူ နဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ တူရဲ့ ခေါင်းဟာ နှစ်ခြမ်းကွဲသွားပါတော့တယ် ။ ဒီတော့လူတွေက နောက်ဆုံးမီးတောက်မီးလျှံတွေနဲ့စမ်းသပ်ကြပြန်တယ် ။
မီးတောက်တွေနဲ့စတီးကိုရစ်ပတ်ပြီး အပူပေးကြတယ် ။ စတီးချောင်းဟာ မီးလျှံတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါ တဖြည်းဖြည်းပျော့ပြောင်းလာတယ် ။ အဲဒီလို ပျော့လာတဲ့အခါမှ စတီးချောင်းကို လိုတဲ့ပုံစံအတိုင်း ကွေးချီဆန့်ချီလုပ်ပြီးပုံသွင်းခဲ့ကြတယ် ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ မာကျောပါတယ်ဆိုတဲ့စတီးချောင်းဟာ မီးတောက်ရဲ့အလိုရှိရာပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းလိုက်နာပြီးပုံဖော်ပေးရရှာပါတော့တယ် ။
ရက်စက်တဲ့ အင်အားတစ်ခုအပေါ် အနိုင်ယူလိုတဲ့အခါ နူးညံ့ပျော့ပြောင်းမှု ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နိုင်မှုနဲ့သာ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်စေပေါ်စေပြီးအနိုင်ယူရပါမယ် ။ ဘယ်လောက်ပဲ မာကျောခက်ထန်နေပါစေ ဘယ်လောက်ပဲ ကြမ်းတမ်းဆိုးသွမ်းနေပါစေ အဲဒါကို အနိုင်ယူမယ့် မီးတောက်လိုမျိုးအရာကတော့ တစ်နေ့ ပေါ်လာမှာ မလွဲပါပဲ ။ အဲဒီအခါ မာကျောတဲ့အရာမှန်သမျှဟာ မီးတောက်လို အရာရဲ့ စီမံမှုအောက်နာခံပြီးလိုသလို ပုံသွင်းခံရမှာ အသေအချာပါပဲ ။
The Right Tool By Aesop အားခံစားဘာသာပြန်သည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 3:31 PM No comments:
မနေ့ညနေက ကားစီးနေရင်း မျိုးကြီးရဲ့ “ ဆေးပေးပါ ” သီချင်းနားထောင်မိရင်း အတွေးတချို့တွေးမိလိုက်တယ် ။ အခုတလော တွေးတာတွေ က များနေပြီး စာကို မယ်မယ်ရရ ချမရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး ။ အခုတော့တွေးမိသလောက်လေး ပြန်ချရေးကြည့်ဖြစ်တယ် ။
၁ ။ သမီးသား ဇနီးမယား လင်ယောင်္ကျား ကိစ္စ အ၀၀တွေကြား ကျွန်တော်တို့ အားလုံး “ တစ်နေ့ သေကို သေရမှာ ” မေ့မေ့လျော့လျော့နေနေကြတယ် ။ မိုးခါးရေတွေ သောက် ပြီး အိပ်လိုက်စားလိုက် နဲ့ တစ်နေ့ သေကိုသေရမယ် ဆိုတာကိုမေ့နေတတ်ကြတယ် ။
၂ ။ နှဖူးစာ ရွာလည်တာကို အသာထား နှဖူးမှာ သေခြင်းတရားက ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာ အချိန်စေ့ပြီလို့ ဖိတ်စာလေးကပ်ပေးလိုက်တာတော့ ကျိန်းသေတယ် ။ အဲဒါကို အပုပ်ကောင် ခန္ဓာကြီးကို အဟုတ်ထင် ပြင်ကြဆင်ကြ ငိုဟယ်ရီဟယ်နဲ့ တစ်ဘ၀တာ ခဏတာလေးမှာ အပူသောကလုံးတွေကြွ ဘ၀ရဲ့ အနှစ်သာရကို မေ့နေတတ်ကြတယ် ။
၃ ။ တစ်နေ့ ပြာဖြစ်ရမယ့် ခန္ဓာဟာ တကယ်တော့ အပုပ်အသိုးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ် ။ ချွေး ၊ သွေး ၊ သလိပ် ၊ ပြည် စတဲ့ အရည်တွေအပြင် အရွတ် အရိုးအရည်ဆိုတဲ့ ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ တကယ်တော့ ယာယီ တည်ရှိမှု တွေသာဖြစ်ပြီး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပုပ်သိုးနံဟောင်လာမယ်ဆိုတာကို မေ့မေ့ လျော့လျော့နေတတ်ကြတယ် ။
၄ ။ တခဏတာ လည်ခွင့်ရတဲ့ လူ့ဘ၀လေးမှာ သက်တမ်းအားဖြင့် ၆၀ ၊ ရက်နဲ့တွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ၂၁၉၀၀ ရက်ပဲ ရှိတယ် ။ ရက်ပေါင်း ၂ သောင်းကျော်လေးကို ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေ များလုပ်ခဲ့ကြပြီးပြီလဲ ဘာတွေများ သံသရာအတွက်ပြင်ဆင်ကြပြီးပြီလဲ ။
၅ ။ သံသရာခရီးရှည်ကြီးကို ဆက်လက် သွားဖို့လမ်းကြောင်းမှာ လူ့ဘ၀ ရတုန်းရခိုက် “ အယူမမှားဖို့လိုတယ် ၊ တလွဲမတွေးကြဖို့လိုတယ် ၊ ယုံကြည်မှု စစ်မှန်ဖို့လိုတယ် ” မဟုတ်တာကို အဟုတ်ထင် အများယောင်တိုင်းလိုက်ယောင်ကြသူတွေဟာ တကယ်တော့ သနားစရာ လူသားတွေဖြစ်တယ် ။ အယူဝါဒစစ်စစ် နဲ့ ဓမ္မ နဲ့ အဓမ္မ ကို ယှဉ်တွဲ သိမြင်လာမှသာ လူ့ဘ၀ အနှစ်သာရကိုမြင်တွေ့နိုင်မယ် ။
၆ ။ ခွင့်သာခိုက်မှ မလိုက်ချင်လျှင် အမိုက်နင့်ပြင် ရှိသေးလေလိမ့်လား ဆိုတဲ့ စာသားလေးအတိုင်း အခွင့်သာနေတဲ့ လူ့ဘ၀ကြီး ရောက်နေခိုက် ကိုယ့်အသိဥာဏ်တွေကို ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ အယူဝါဒ မှိုင်းတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုတယ် ။ တရားစစ် တရားမှန်ကို ရှာတွေ့ပြီး စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုရှိရာ လမ်းကိုလျှောက်နိုင်မှသာ အေးချမ်းနိုင်မယ် ။
၇ ။ ကိုယ်သေရင်ကိုယ့်နောက်ဘယ်သူတွေလိုက်ကြမလဲ ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ဇနီးမယားလင်ယောင်္ကျားတွေလား ကိုယ်ချစ်တဲ့ သမီးသား ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေလား ။ ကိုယ်သေရင် ကိုယ့်ကို ၇ ရက်လောက်အထိ ငိုကြလိမ့်မယ် ပြီးတဲ့အခါ မေ့မေ့လျော့လျော့ လူ့ဘ၀ ဇာတ်ခုံကို သူတို့ဆက်ကနေကြလိမ့်ဦးမယ် ။ သင် လူ့ဘ၀ကို လာတာ တစ်ယောက်တည်းလာခဲ့ရသလို သင်ပြန်တဲ့အခါမှာလည်းတစ်ယောက်တည်းပြန်ရမှာပဲဖြစ်တယ် ။ သင်သေသွားသော် သင့်နောက်ကို ဘယ်သူမှ မလိုက်ပါဘူး ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အ၀တ်တစ်ထည်ကိုယ်တစ်ခုလည်း ပြာအတိဖြစ်သွားမှာပါ ။
၈ ။ ကိုယ်သေရင်ကိုယ်နဲ့ထပ်ချပ်မကွာလိုက်မဲ့အရာတွေတော့ရှိတယ် ။ သံသရာတလျှောက်အရိပ်လို မခွဲမခွာလိုက်နေမဲ့အရာတွေပေါ့ ။ အဲဒါတွေကတော့ ကိုယ်တစ်သက်လုံးပြုလုပ်ခဲ့သမျှ “ ကုသိုလ် နဲ့အကုသိုလ် ” တွေပဲဖြစ်တယ် ။ “ တရား နဲ့ မတရား ” တွေပဲဖြစ်တယ် ။ “ ဒါန ၊ သီလ ၊ ဘာဝနာ ” တွေပဲဖြစ်တယ် ။ သင်ချစ်တဲ့အရာမှန်သမျှ သင်စွန့်ခွာလို့ မိုးရွာရွာ နေပူပူ သင့် ခရီးကို သင်တစ်ယောက်တည်းသာ ထွက်ခွာရမှာဖြစ်တယ် ။
၉ ။ ရတုန်းရခိုက်လူ့ဘ၀လေးမှာ သင် အရာအားလုံးကို မယုံကြည်ပဲနေနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် “ တစ်နေ့ သေကိုသေရမယ် ” ဆိုတဲ့စကားကိုတော့မယုံကြည်လို့မရဘူး ။ အဲဒါဟာ Universal Truth ဖြစ်တယ် ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သင်အပါအ၀င်လူတွေဟာ တစ်နေ့ သေကိုသေရမှာဖြစ်တယ် ။ အဲဒါကို ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်တွေ နဲ့ အတုအချင်းချင်းပြိုင်ရင်း လောဘဒေါသ မောဟတွေကြားလောင်မြိုက်ရင်း ဆင်းရဲချမ်းသာပြိုင်လို့ တရားစစ်ကို မေ့လျော့နေတတ်ကြတယ် ။
၁၀ ။ ခဏတာ အချိန်လေးမှာ အရာရာကို “ မေတ္တာထား ပါ ” ဆိုတဲ့စကားလေးပဲမှာချင်ပါတယ် ။ မေတ္တာဟာ ဂရုဏာနဲ့မတူပါဘူး ။ လမ်းပေါ်မှာ ခွေးတစ်ကောင် ကားကြိတ်လိုက်လို့ သင်က တွေ့သွားတယ်ဆိုပါစို့ ။ “ ဟာ သနားလိုက်တာ ” ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်ခြင်းဟာ ဂရုဏာ အဆင့်ပဲဖြစ်တယ် ။ “ ဟာ သနားလိုက်တာ ဒီခွေးလေး ဒါဏ်ရာကို အသက်ချမ်းသာရာရအောင်ငါကယ်လိုက်ဦးမှ ” ဆိုပြီးခွေးကလေးကိုကယ်ဆယ်တဲ့အဆင့်ရောက်မှာ “ မေတ္တာ ” လို့ခေါ်တယ် ။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ “ အပြစ်တွေ လုပ်ခဲ့သမျှ ဒါန သီလ ဘာဝနာ တရား မေတ္တာ တရားနဲ့ဆေးကြောရမယ် ” အခွင့်သာတုန်းလေး မေတ္တာ တရားကိုအခြေခံပြီး ကိုယ်မပိုင်တဲ့ ဥစ္စာတွေကို မတွယ်တာနေပါနဲ့ ။ လှူသင့်တာလှူ လို့ စွန့်ကြဲသင့်တာစွန့်ကြဲပါ ။ မီလီယံနာသူဌေးကြီးလည်း ပြာ အဖြစ်ကလွဲလို့ ဘာမှမဖြစ်နိုင်သလို သင်လည်း ပြာအဖြစ်ကလွဲလို့ ဘာမှဖြစ်နိုင်ဘူး ။ ကြုံတုန်းကြုံခိုက်လေးမှာ ငြိမ်းအေးချမ်းမြေ့စွာနေလို့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားဒေသနာတော်တွေကို ဆည်းပူး လေ့လာ ရင်း သံသရာကို ငြိမ်းချမ်းစွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ ။
Posted by သက်တန့်ချို at 3:28 PM6comments:
တူးသောင်ဇင်ဆဲဗန်းအထက် ၊ Hire Purchase စနစ် နှင့် ကားအိပ်မက်များ
ဒီတစ်ခါတော့ထူးထူးခြားခြားကိုယ်တစ်ခါမှမရေးဖူးတဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခု ရေးကြည့်ချင်စိတ်ပေါ်လာခဲ့တယ် ။ အဲဒါကတော့ ခေါင်းစဉ်မှာ တပ်ထားတဲ့အတိုင်း “ံတူးသောင်ဇင်ဆဲဗန်းအထက် ၊ Hire Purchase စနစ် နှင့် ကားအိပ်မက်များ ” ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ဇာမချဲ့တော့ပါဘူး ။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ ကားတွေ နဲ့တကွ တန်ဖိုးမြင့်ပစ္စည်းတွေကို Down Payment ကို ၂၀ % သို့မဟုတ် ၃၀% ပေးပြီး တစ်နှစ်ဖြစ်စေ နှစ်နှစ်ဖြစ်စေ အရစ်ကျ ဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့စနစ်ကြောင့် ငွေ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းပေးစရာမလိုသလို လိုချင်တဲ့ တန်ဖိုးမြင့်ပစ္စည်းတွေလည်း လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်မှုရခဲ့ကြတယ် ။
Hire Purchase ကို ဘယ်သူတွေ စိတ်ဝင်စားကြသလဲ ?
ဒီမေးခွန်းဟာ သိပ်ကို ကောင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်တယ် ။ HP ကို စိတ်ဝင်စားကြသူတွေဟာ ငွေအလုံးအရင်း အများကြီးကို တစ်ခါတည်းပေးဖို့မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်လစာလေးနဲ့ လစဉ်အရစ်ကျ ပေးသွင်းဖို့အဆင်ပြေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ ဒါဟာ ရှင်းလင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုပါ ။ ကိုယ့်ဆီမှာ အလုံးအရင်းရှိရဲ့နဲ့ HP ကို အတိုးတွေပေးပြီး ၀ယ်မဲ့သူတွေကတော့နည်းမယ်ထင်ပါတယ် ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ် ငွေအလုံးအရင်းကိုမပြိုပျက်ချင်လို့ လစဉ်လေးပေးတော့မသိသာဘူးဆိုပြီး စိတ်ဝင်စားသူတွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ် ။
AGD Bank ၏ HP စနစ်အား လေ့လာကြည့်မိခြင်း
အမှန်တော့ ဒီဆောင်းပါးစရေးဖြစ်တာ AGD ရဲ့ ပထမ ဆောင်းပါးဖြစ်တဲ့ ငွေကြေးအာမခံ နဲ့ အာမခံ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦး ထားရှိပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ် ရေးချင်လို့ ဖြစ်တယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီမနက်ရောက်မှ စာတွေလိုက်ဖတ်ကြည့် တော့ “ ကား အရစ်ကျဝယ်ယူခြင်း အတွက် စနစ်အသစ် ” ဆိုတဲ့လင့်လေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်မိတယ် ။
“ ယခင်က ငွေကြေးအာမခံဖြင့်သာ ဝယ်ယူနိုင်ကြသည့်စနစ်အစား၊ ယခုအခါတွင် ငွေကြေးအာမခံမလိုဘဲ မည်သူမဆို ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပေးအပ်ပါသည် ”
၃ ။ သက်တမ်းနှင့် နှုန်းထားများ -
ရေးထားတာ ဒီအထိ တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲ ဒါပေမယ့် နုတ်စ်အောက်မှာ ရေးထားတဲ့ ကွန်းမန့်တွေကို စိတ်ဝင်စားလို့ ဖတ်ကြည့်ပြီး မေးခွန်းနဲ့အဖြေအဖြစ် ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတဲ့ အချက်လေးတွေကို ထုတ်နုတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ် ။
မေး - ငှားရမ်းခ နှင့် ၀န်ဆောင်ခ ကို လတိုင်းပေးရမှာလား
ဖြေ - ငှားရမ်းခနှင့် ၀န်ဆောင်ခ သည် ကနဦး ပေးချေသော ငွေအဖြစ် ပေးချေရမည် ဖြစ်ပြီး လစဉ်လတိုင်း ပေးချေစရာ မလိုအပ်ပါ။
မေး - နားမရှင်းပါ။ ဥပမာပေးပြီး ရှင်းပြစေလိုပါသည်။ သိန်း ၁၀၀ တန်ကား ၁နှစ် အရစ်ကျပေးဝယ်လျှင် ဘဏ်သို့ မည်မျှ လစဉ် ပေးသွင်းရမယ် ဆိုတာမျိုး။
ဖြေ - သိန်းတစ်ရာတန် ကားအတွက် သက်တမ်း ၁နှစ် ကနဦး ပေးသွင်းငွေ ၂၀% ဖြင့် သတ်မှတ်ပါက - ကနဦးပေးသွင်းငွေ ၂၀% + ဝန်ဆောင်ခ ၁%+ ငှားရမ်းခ ၈% ကို ပထမဦးဆုံး ပေးသွင်းရပါမည်။ ကျန်ငွေ ၈၀% ကို ၁၂လ ခွဲ သွင်းပေးရပါမည်။
မေး - AGD မေးပါရစေ။ ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို နားလည်ပါသည်။ သို့သော် ငှားရမ်းခကို ဘာကြောင့် ၁၀၀% ပေါ်မှာ ယူရတာလဲ?။ ဝယ်သူဘက်မှ ၂၀%ကို Down Payment ပေးထားသောကြောင့် ငှားရမ်းခကို ၈၀%ပေါ်တွင်ယူမှသာ တရားမျှတမှု ရှိမှာပေါ့။ သေချာပြန် သုံးသပ်ပေးပါဦး။ဝယ်သူမှ ကိုယ့်ငွေ ၂၀%ပေါ် ကိုယ်ငှားရမ်းခ ပြန်ပေးနေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဖြေ - အာရှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သတ်
မှတ်ထားသည့် လမ်းစဉ်များ၊ စည်းမျဉ်းဘောင်များ၊ ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်နေရပြီး ထိုစည်းမျဉ်း ကန့်သတ်ချက်မူဝါဒများအတွင်းမှ ဝန်ဆောင်မှုကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပေးရပါသည်။ AGD ဘဏ်အနေဖြင့် rental fees များ တွက်ချက်ကောက်ခံရခြင်းမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၊ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများသည် သတ်မှတ်ထားသည့် ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွန်ဆောင်ရွက်ခွင့် မရှိပါ။ ငှားရမ်းကာလသတ်မှတ်ချက်များသည် ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီများ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် သဘောတူညီချက်ပဋိဥာဉ်များဖြင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ အာရှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက် အနေဖြင့် မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်သန်၍ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများကို အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မေး - အရင်ကလို အာမခံ၂ဦးထားပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့....ဘာအရင်စလုပ်ရမလဲ
ဖြေ - (၁) ပထမဦးစွာ သက်ဆိုင်ရာ အရောင်းဆိုင်သို့ သွားရောက်ပြီး ၀ယ်ယူလိုသည့် ပစ္စည်း အမျိုးအစားနှင့်ဈေးနှုန်းအား ရွေးချယ် ရပါမည်။
(၂) ပစ္စည်းရွေးချယ်ပြီးပါက ပစ္စည်းရောင်းချသူထံမှ Hire Purchase စနစ်ဖြင့် ပစ္စည်းဝယ်ယူခွင့်ပြုစာနှင့် စာရွက်စာတမ်းများအား ယူဆောင်၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များနှင့်အတူ ဘဏ်သို့ လာရောက်ဆက်သွယ်ရပါမည်။ ၀ယ်ယူသူနှင့် ပတ်သတ်သော -
- လိပ်စာပါ ရပ်ကွက်နေအိမ်တွင်နေထိုင်ကြောင်း ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ၏ထောက်ခံစာ။
(၃) ပစ္စည်းဝယ်ယူသူသည် ဘဏ်တွင် Account ဖွင့်ပြီး သတ်မှတ်သည့် ကနဦးပေးသွင်းရမည့် ငွေများ ပေးသွင်းပြီး ပါက ဘဏ်မှ ထုတ်ပေးသော ပစ္စည်းထုတ်ယူခွင့် အကြောင်းကြားစာနှင့် အတူ သက်ဆိုင်ရာဆိုင်တွင် မိမိဝယ်ယူလိုသည့် ပစ္စည်းကို ရယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
(၄) ၀ယ်သူသည် အရစ်ကျပေးသွင်းရန် ရှိသည့်ငွေကို သတ်မှတ်ထားသည့် သက်တမ်းအလိုက် ဘဏ်သို့ ဆက်လက်ပေးသွင်းရပါမည်။
မေး - ငှားရမ်ခ အပြင် ဘဏ်စိုက်ထုတ်သောငွေအတွတ် အတိုးရောပေချေးရမည်လား။
ဖြေ - ငှားရမ်းခ သာ ပေးစရာ လိုပါမည်။
မေး - ကနဦးပေးသွင်းငွေ၂၀% သက်တမ်းတစ်နှစ် ကားတန်ဖိုးသိန်း(၁၀၀)ဆိုပါကစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ပေးသွင်းရမလဲ ဆိုတာသိချင်ပါတယ်
ဖြေ - သိန်းတစ်ရာတန် ကားအတွက် သက်တမ်း ၁နှစ် ကနဦး ပေးသွင်းငွေ ၂၀% ဖြင့် သတ်မှတ်ပါက - ကနဦးပေးသွင်းငွေ ၂၀% (သိန်း၂၀) + ဝန်ဆောင်ခ ၁%(၁သိန်း) + ငှားရမ်းခ ၈%(၈သိန်း) စုစုပေါင်း ၂၉သိန်း ကို ပထမဦးဆုံး ပေးသွင်းရပါမည်။ ကျန်ငွေ ၈၀% (သိန်း၈၀) ကို ၁၂လ ခွဲပြီး တစ်လလျှင် ၆သိန်း၆သောင်း၆ထောင် ခန့် သွင်းပေးရပါမည်။
ဖြေ - ယခင်က ငွေကြေးအာမခံဖြင့်သာ ဝယ်ယူနိုင်ကြသည့်စနစ်အစား၊ ယခုအခါတွင် ငွေကြေးအာမခံမလိုဘဲ မည်သူမဆို ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။မော်တော်ကားပိုင်ဆိုင်မှု စာရွက်စာတမ်းကို ဘဏ်တွင် အပ်နှံထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ် အကုန်လုံးဖတ်ချင်ရင် “ ဒီနေရာလေးမှာ ” သွားဖတ်ကြပါ ။ မေးခွန်းတွေလည်းသွားမေးနိုင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးရှင်းပါတယ် ။ ကျွန်တော်မရှင်းတာ ၂ ချက်ပဲရှိပါတယ်း)))
၁ ။ ငှားရမ်းခကို ဘာကြောင့် ၁၀၀% ပေါ်မှာ ယူရတာလဲ?။ ဝယ်သူဘက်မှ ၂၀%ကို Down Payment ပေးထားသောကြောင့် ငှားရမ်းခကို ၈၀%ပေါ်တွင်ယူမှသာ တရားမျှတမှု ရှိမှာပေါ့။ သေချာပြန် သုံးသပ်ပေးပါဦး။ဝယ်သူမှ ကိုယ့်ငွေ ၂၀%ပေါ် ကိုယ်ငှားရမ်းခ ပြန်ပေးနေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
၂ ။ car company တွေက agd bank နဲ့ညျိနှိုင်းဆဲလို့သိရတယ်။ ဘယ်တော့လောက် လုပ်ငန်းစနှိုင်မယ်ထင်ပါသလဲ ။
ခေါင်းစဉ်မှာရေးထားသလိုပဲ ကားတွေက တူးသောင်ဇန် ဆဲဗန်းအထက်မှ စလစ်မလိုတာမဟုတ်လား ။ စလစ်ရှိပြီးသားသူတွေအတွက် ဘယ်မော်ဒယ် ရွေးဝယ်ဝယ်ပြဿနာမရှိပေမယ့် အခုမှ အသစ်ဝယ်မယ့်သူတွေ စလစ်မရှိတဲ့သူတွေအတွက် တော့ ဒါဟာ အခက်အခဲရှိနိုင်တယ် ။
နောက်ဆုံး အချက် စိတ်ထဲမရှင်းလို့ ဖူဂျီရာမ ကိုဖုန်းဆက်ကြည့်တော့ ၂၀၀၆ အောက်ပဲရှိတယ်တဲ့ ( အဆင်မပြေပြန်ဘူး စလစ်ဖိုးထပ်စိုက်ရမယ်ဆိုတော့ ဟုတ်တယ်ဟုတ် )
ဂါမဏိကို ဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်တယ် ( ၂၀၀၇ အထက်က Probox နဲ့ Adivan ပဲရှိတယ်တဲ့ ၁၅၀ ၀န်းကျင်လို့ပြောတယ် မဆိုးဘူးး)) စလစ်ဖိုးမလိုတော့ဘူး )
ဒီလိုပါပဲ ကျွန်တော်လည်း ဗဟုသုတအနေနဲ့ “ံတူးသောင်ဇင်ဆဲဗန်းအထက် ၊ Hire Purchase စနစ် နှင့် ကားအိပ်မက်များ ” ကိုရေးကြည့်လိုက်ပါတယ် ။ ဘာပဲပြောပြော အိပ်မက်ဆိုတာ တကယ်မဖြစ်လာနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးမဟုတ်လား ။ အိပ်မက်တွေမျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေမှသာ တစ်နေ့ကြရင်အရာရာဟာ အကောင်အထည်ပေါ်လာကြမှာပါ ။
မှတ်ချက် - AGD bank ၏ HP ကိုတွက်ကြည့်ချင်ပါက “ ဒီနေရာလေးမှာ ” တွက်ကြည့်နိုင်ပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 4:49 PM3comments:
ခင်ဗျားတို့သိလား . . ကျုပ်တို့ဟာ သိပ်သနားဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်တွေ
ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ တန်လောက်ကားတစ်စီးကို ဒေါ်လာ တစ်သောင်းကျော်ပေးဝယ်ရ
တူးသောင်ဇင်န် ဆဲဗန်း အထက် -- ကညန/ CIF / ( ခေါင်းတွေ မူး )
ဒီကြားထဲ ဖြတ်သန်းရတဲ့အဆင့်ကများ---လှော်သင့်တာလှော် --ကြော်သင့်တာကြော်
ဒေါ်လာ ငါးကျပ်တန် ဆင်းန်ကဒ်တွေကို ဒေါ်လာ ၂၀၀ ကျော်ပေးဝယ်ရ
ပုရွှက်ဆိတ်တွေအစာငတ်လို့ တန်းစီနေကြသလိုမျိုး -- အဆူအငေါက်ခံခဲ့ရ
ရန်ကုန်ဟာ Crisis ဖြစ်နေပြီ -- ကမ္ဘာအေးလမ်းကြောဟာ Crisis ဖြစ်နေပြီ
ကျုပ်တို့ ဟာ သိပ်သနားဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်တွေ -- ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး
တိုးတိုးပြီး တန်းစီ --- ရှေ့ကမထွက်နိုင်သေး နောက်မှာ စုပုံပေး
လှည်းတန်းဟာ Crisis ဖြစ်နေပြီ ဂုံးကျော်တံတားတွေ Crisis ဖြစ်နေပြီ
ပြွတ်သိပ်ကြပ်ညပ်သော ရထားတွဲတွေဟာ ရန်ကုန်ထဲမှာ ဟုတ်ရဲ့လား
ဘယ်ကို ခရီးဆက်နေကြ -- ဘယ်ဘူတာမှာ အဆုံးသတ်ရပါ့
ဆယ်မိနစ်စာ အကွာအဝေးကို မိနစ်လေးဆယ်လောက် Crisis ဖြစ်တယ်
ရန်ကုန်မှာ Action မရှိတော့ဘူး ရန်ကုန်မှာ Plan မရှိတော့ဘူး
ကျုပ်တို့ဟာ Crisis တွေကို သယ်ပိုက်ထားရတဲ့ကောင်တွေ
အေးဂျင့်တွေက အမြဲတမ်းအားဂျန့် --အလျှင်လိုလို --
ဒီကထွက်သွားသူတွေကို အပစ်မဆိုနဲ့ ဒီကိုပြန်မလာကြသူတွေကို အပစ်မဆိုနဲ့
ခင်ဗျားတို့သိလား ကျုပ်တို့လည်း သိပ်လိုချင်တပ်မက်ကြတယ်
ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ တန်ကား -- ဒေါ်လာ ၅ ကျပ်တန် ဆင်းန်ကဒ်
ဒေါ်လာ ၅၀၀ တန် အကြွေးဝယ်ကဒ် -- အိုင်ဖုန်းဖိုက် နဲ့စက်ရုပ်နံပတ် သရီး
ကျုပ်တို့ဟာ သိပ်သနားဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်တွေ ...
Down Payment တွေ ခေတ်စားလာ --- HP တွေခေတ်စားလာ
ဘဏ်တွေခေတ်စားလာ --- သံသရာဟာ ထဲထဲဝင်ဝင်မလွတ်ကင်းသေး
သံသရာဟာ ဖြူဖြူစင်စင် မလည်ပတ်နိုင်သေး
ကျုပ်တို့ဟာ ကိုယ့်အမိုးအကာလေးထဲ မျက်စိသူငယ်နားသူငယ်
ကျုပ်တို့ဟာ သိပ်သနားဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်တွေ ...။
(Crisis - သေရေးရှင်ရေးကာလ ၊ ဘေးကျပ်နံကျပ်ကာလ ၊ အရေးအခင်း ကပ်ဆိုက်ကာလ
အေးဂျင့် - Agent
အားဂျန့် - Urgent)
Posted by သက်တန့်ချို at 2:55 PM 8 comments:
နန်းခင်ဇေယျာကို Miss Internet အတွက် တရားဝင်လင့်မှာ...
တူးသောင်ဇင်ဆဲဗန်းအထက် ၊ Hire Purchase စနစ် နှင့် က...